समाचार Archives - Ekarmachari
८ असार २०७८, मंगलवार १३:१०
लाइसेन्स परीक्षा तत्काल नखुल्ने
सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) परीक्षा तत्काल नखुल्ने भएको छ । बायोमेट्रिकका लागि प्रतिक्षामा रहेका सेवाग्राहीहरुको हकमा यातायात व्यवस्था विभागले अर्को सूचना जारी नहुँदासम्म सेवा स्थगित रहेको बताएको छ। लाइसेन्स नवीकरणको काम भने आजदेखि सुरु हुने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै ट्रायल परीक्षा उत्तीर्ण भएकाहरुको राजश्व संकलन समेत थालिएको यातायात व्यवस्था कार्यालय ठूलो भर्याङले जनाएको छ। २०७७ […]
८ असार २०७८, मंगलवार १३:१० June 22, 2021
हरेक वर्ष १ महिनाको पेन्सन आविष्कार केन्द्रलाई दिने पूर्व डीआईजी सुब्बाको घोषणा
नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी डा. राजिब सुब्बाले हरेक वर्ष १ महिनाको पेन्सन राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई दिने घोषणा गरेका छन् । सुब्बाले मंगलबार निवृत्तिभरणबापत प्राप्त रकम २७,८८२ रूपैयाँ आविष्कार केन्द्रको खातामा जम्मा गरेका छन् । कोरोना महामारीका बेला विभिन्न प्रविधि विकास र सहजीकरण गरिरहेको आविष्कार केन्द्रका लागि देशविदेशबाट सहयोग संकलन भइरहेको छ ।
८ असार २०७८, मंगलवार १२:२० June 22, 2021
यी हुन् खसीको भन्दै बाख्राको मासु बेच्ने
रौतहटको गौर नगरपालिका वडा नम्बर १ नगरपालिका बजारमा खसीको मासु भन्दै बाख्राको मासु बेच्ने दुई जना व्यापारी पक्राउ परेका छन् । बाख्राको मासुलाई खसीको मासु भन्दै बेचेको आरोपमा गौर नगरपालिका वडा नम्बर ३ का २४ वर्षीय लाल महमम्द र सोही ठाउँका ३० वर्षीय महमम्द नसिवलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले जनाएको छ । […]
८ असार २०७८, मंगलवार ११:३८ June 22, 2021
नेपाल प्रहरीका १६ डीआईजीको सरुवा, को कहाँ ?
आइतवार गृह मन्त्रालयमा बसेको मन्त्रीस्तरको बैठकले नेपाल प्रहरीका १६ प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) को सरुवा भएको छ । जसअनुसार अख्तियार दुरुपायोग अनुसन्धान आयोगको केन्द्रीय कार्यालय टंगालमा कार्यरत अरुणप्रसाद विसिलाई प्रदेश नं १ प्रहरी कार्यालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यस्तै कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख वसन्त कुमार पन्त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग केन्द्रीय कार्यालय प्रहरी महाशाखा […]
७ असार २०७८, सोमबार १८:३८ June 21, 2021
वनको कर्मचारी हुँ भन्दै रकम असुली
वनको कर्मचारी हुँ भन्दै काठ मिलसँग असुली गर्ने दुई दुइ जना पक्राउ परेका छन् । उनीहरुसँग पत्रकार परिचय पत्र समेत रहेको छ । फर्निचर उद्योगहरुमा वनको कर्मचारी हुँ, आर्थिक सहयोग नगरे राम्रो नहुने भन्दै चेतावनी दिने दुई जनालाई इलाका प्रहरी कार्यालय सिजुवाले पक्राउ गरेको हो । पक्राउ पर्नेमा सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका–६ जुटबिकास बस्ने ५० वर्षीय […]
७ असार २०७८, सोमबार १२:५२ June 21, 2021